Sela plastika - Mestech Industrial Limited
Sombiny plastikadia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, fitaovana elektrika, fitsaboana, fanaka ao an-trano, fiara, fiaramanidina, indostria, fitaovana ary indostria hafa. Ny resina plastika dia azo hafanaina ao amin'ny lavaky ny bobongolo mba hahazoana endrika sy habe amin'ny ampahany sy vokatra plastika. Miankina amin'ny fivoaran'ny teknolojia simika maoderina, maro karazana ny karazana plastika vokarina amin'ny ambaratonga lehibe.
Mestech dia nirotsaka tamin'ny famolavolana ny faritra plastika, ny fanamboarana lasitra fanindronana ary ny famolavolana ny ampahany sy ny vokatra, ary koa ny fizotran'ny fitsaboana toy ny sary hosodoko, ny fanaovana pirinty amin'ny lamba landy ary ny elektrika. Ireto avy ny vokatra plastika ataon'ny mpanjifa:
Trano plastika ho an'ny herinaratra
Sombiny plastika ho an'ny elektronika
Fizarana koronosy indroa
Vokatra plastika mangarahara
Post fanodinana ny faritra plastika
Tabilao plastika misy fanontana efijery 3D nano
Fitaovana elektronika birao
Vokatra plastika misy nylon
Fonenana tsy tantera-drano
Mampiavaka ny vokatra plastika:
Lanja maivana 1 Azo ampiasaina hanamboarana faritra sy vokatra maivana.
2 Fiorenana simika tsara sy fanoherana ny harafesina Ny ankamaroan'ny plastika dia misy fanoherana tsara harafesina amin'ny asidra, alkaly ary zavatra simika hafa
3 insulation elektrika tena tsara, ny plastika mahazatra dia mpampita herinaratra mahantra, ary ny fanoherana amboniny sy ny fanoherana ny habetsany dia tena lehibe. Noho izany, ny plastika dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny elektronika sy mekanika. Toy ny tariby fanaraha-maso voaroaka plastika.
4 insulated heat tsara Ny conductivity mafana amin'ny plastika dia ambany dia ambany, mitovy amin'ny vy vy 1 / 75-1 / 225,
5 isan-karazany ny hery mekanika. Izy io dia manana tanjaka manokana miavaka Ireo fizarana mekanika amin'ny plastika, toy ny hamafin, tanjaka am-pahefana, ny fanitarana ary ny tanjaka misy fiantraikany, dia zaraina betsaka. Noho ny hery misintona kely sy ny tanjaka avoakany dia manana tanjaka manokana manokana ny plastika.
6 Misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana, fanafoanana ny tabataba ary fitrohana ny hatairana.
7 fanoherana tsara sy mangarahara
8 Plastika tsara: mora ny mamolavola endrika sy habe samihafa amin'ny ampahany amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanafanana bobongolo, mba hahatsapa famokarana lehibe sy mahomby.
Mestech dia mpamokatra matihanina amin'ny lasitra fanindronana sy ny faritra plastika. Afaka manome mpanjifa karazana vokatra plastika sy serivisy izahay, manantena ny hiara-miasa aminao.Mifandraisa aminay raha ilaina.